I-China iphepha elinamathele eline-eva, umenzi we-epe foam kunye noMthengisi | Sihai
I-PP ibhodi engenanto luhlobo olutsha lwezinto zokupakisha ukhuselo lokusingqongileyo, kwinkqubo yokusetyenziswa ayizukuvelisa uthuli, kunye nobomi benkonzo ende, ingaphezulu kwamaxesha ama-4 ukuya ku-10 kubomi bebhodi enamanzi, enokuphinda isetyenziswe, ngokuthe ngcembe ithathe indawo yokuma kwephepha ibhodi enamazinki, ibonakalise ubukhulu becala kupakisho lwemveliso.
I-PP ibhodi engenanto luhlobo olutsha lwezinto zokupakisha ukhuselo lokusingqongileyo, kwinkqubo yokusetyenziswa ayizukuvelisa uthuli, kunye nobomi benkonzo ende, ingaphezulu kwamaxesha ama-4 ukuya ku-10 kubomi bebhodi enamanzi, enokuphinda isetyenziswe, ngokuthe ngcembe ithathe indawo yokuma kwephepha ibhodi enamazinki, ibonakalise ubukhulu becala kupakisho lwemveliso. Ukongeza, ngenxa yokuba PP ipleyiti ezibuhlazarha ukukhanya ubunzima, elungileyo ubunzima, ubhetyebhetye ngobukhulu kunye nezisezantsi kwiindleko isalamane, PP ibhokisi ipleyiti engenanto ingeniso mayixhotyiswe izincedisi ezahlukeneyo has a endaweni ibhokisi inaliti ukubuya ingeniso.
Iphepha elinamanani amancinci kunye neemveliso ezahlukeneyo zokupakisha kunye nokuhambisa, ifuna izinto ezizodwa ezifana ne-ESD, i-conductive kunye nokuncamathisela i-EVA, igwebu, igwebu le-EPE, i-ESD EVA kunye nezinye ukukhusela iimveliso, ngakumbi ezinye ibhokisi yebhokisi engenayo iya kusebenzisa ukwahlula kwe-EVA, ezinye iphe. Ulwahlulo lwephepha elingenanto luya kunamathisela i-EVA, i-EPE foam kwimveliso yokukhusela, iphepha elingenanto kunye ne-eva, ibhokisi yengeniso ye-foam, ulwahlulo lwe-eva lusetyenziswa kakhulu kumashishini amaninzi, kunokuba iimveliso zenziwe ngendlela eyahlukileyo, ubukhulu obahlukeneyo bokupakisha iimveliso, iphakheji, Ukuhambisa ngenqanawe, yinto efanelekileyo yokupakisha indibano yeemveliso zokupakisha, ukuhambisa ngenqanawa, isitori, ukuhamba, i-epress.
Egqithileyo pp ibhokisi engenayo enencasa
Okulandelayo: ipheyini yekheji yokugcina